Imikhiqizo Factory | China Imikhiqizo Abakhiqizi nabahlinzeki
I-WAS Series Ampoule Water Sterilizer
Njengesikhungo sodwa se-R & D kuzwelonke semishini yokubulala amagciwane kanye nokuvala inzalo, i-SHINVA iyona yunithi yokuqala yokubhala yezinga likazwelonke nezezimboni lemishini yokuvala inzalo. Manje i-SHINVA iyisisekelo esikhulu sokukhiqiza inzalo nemishini yokubulala amagciwane emhlabeni. I-SHINVA isidlulile isitifiketi se-ISO9001, CE, ASME nengcindezi yokuphatha uhlelo lomkhumbi.
I-RXY Series Geza-Gcwalisa-Gcwalisa-Seal Line
Umugqa Wokukhiqiza we-Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line usetshenziselwa ukuwasha, ukuvala inzalo, ukugcwalisa nokufaka uphawu lomjovo omncane we-vial in workshop. Ifaka ukwakheka okuthuthukile, ukwakheka okunengqondo, izinga eliphakeme le-automation, ukusebenza okuzinzile nokwethembekile, ukusebenza kahle kokukhiqiza kanye nokuhlanganiswa kwemishini nogesi. Izingxenye okuthintwe nazo uketshezi lwezidakamizwa zenziwe nge-AISI316L kanti enye yenziwe nge-AISI304. Izinto ezisetshenzisiwe azinakho ukungcoliswa kwezidakamizwa nemvelo.
I-PSMR Series Super-heated Water Sterilizer
Izinto ezinekhono: Okukhethekile kokuhlinzwa kwengalo yokusebenza kwamarobhothi.
RXY Series Form-Gcwalisa-Seal Line
Umugqa wesikhwama se-non-PVC wesikhwama sokugcwalisa-uphawu (i-FFS Line) sakhiwa isigaba sokwakha isikhwama, isiteshi sokugcwalisa uphawu, ikhabethe lokulawula kanye ne-laminar flew hood. Umshini Wokugcwalisa-Wokufaka uphawu we-Non-PVC. Ishadi lokuhamba ngale ndlela elandelayo: Ukuphrinta kwifilimu → Ukwenza i-Bag → Welding ye-Port → Ukudluliswa kwesikhwama → ukugcwaliswa → Ukufakwa kwesikhwama kwe-Bag
I-ECOJET Series Injection molding & Blowing system
Umshini usetshenziselwa ikakhulukazi ukwenza ibhodlela elingenalutho kusuka ku-PP granule. Kubandakanya Umjovo Wokubumba Umshini Nomshini Wokubhodlela Ibhodlela.
Umshini we-SSL Series Wash-Fill-Seal
Umshini usetshenziselwa ikakhulukazi ukuwashwa, ukugcwaliswa nokufakwa uphawu kwe-PP ukumnika ibhodlela. Ilungele ukubekwa uphawu okushisayo kwekepisi elihlanganisiwe, kufaka phakathi iyunithi yokuwasha umoya, i-WFI iyunithi yokuwasha, iyunithi yokugcwalisa ingcindezi yesikhathi, iyunithi lokufaka uphawu / i-capping unit.
Manual Door Futha Washer
I-Rapid-M-320 iyi-manual manual washer-disinfector eyacwaninga futhi yathuthukiswa ngokuya ngezidingo zezibhedlela ezincane noma isikhungo. Umsebenzi wayo nokuwasha ngempumelelo kulingana neRapid-A-520. Futhi ingasetshenziselwa ukubulala amagciwane ngezinsimbi zokuhlinza, izinto ezithengiswayo, amathileyi wezokwelapha kanye namapuleti, izinsimbi zokubulala izinzwa namapayipi lukathayela esibhedlela se-CSSD noma egumbini lokuhlinza.
Ama-Washer Wokucindezela Okubi
Uhlelo Lokuqapha lwe-SHINVA Lomphumela Wokugeza i-Lumen
■ Ukugeza indlela yokuhlola umphumela
I-Pulse vacuum wash ihlukile ekuhlanzweni kwesifutho, isebenzisa isimiso somsebenzi esisha ukuxazulula zonke izinhlobo zezinsimbi eziyinkimbinkimbi ezinomsele omningi, igiya kanye ne-lumen. Ukuze kuqinisekiswe isayensi ngomphumela wokuwasha, i-SHINVA yethula izixazululo ezithile zokuqapha umphumela wokuwasha ngokuya ngezici:
I-PSMP Series Super-heated Water Sterilizer
Uhlelo lwe-GP Series Automation
Uhlelo oluzenzakalelayo luhlanganiswe nokuthuthwa okuzenzakalelayo nokulayishwa okuzenzakalelayo kwezinhlobo ezahlukahlukene ukumenyezelwa, itreyi yokuhamba ngokuzenzekelayo kanye nokwehlisa okuzenzakalelayo ngemuva kwenzalo, okuyisizukulwane sakamuva semishini yokwenziwa kwemithi.
Ububanzi be-washer-disinfector yi-1200mm kuphela enikezela ukufakwa okulula futhi okunciphisa kakhulu izindleko nesikhathi sokufakwa.
Umshini wePBM Series BFS
Umshini wamabhodlela we-plastic-blow-fill-seal wemishini yamabhodlela usebenzisa ubuchwepheshe obudidiyelwe (ngemuva kwalokhu i-BFS), okuyinqubo yokukhiqiza yokukhiqizwa kokufakwa kokufakwa kwepulasitiki. Umshini wokugcwalisa ama-aseptic amathathu-in-one usetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni imikhiqizo yokupakisha yepulasitiki yokuvala inzalo, imikhiqizo ye-aseptic, njll. Ayifanele kuphela ukukhiqizwa kwemikhiqizo eminingi, kepha futhi inokuzinza okuhle kwe-aseptic, amathuba okuphazamiseka okuphansi okuphansi , izindleko zokukhiqiza eziphansi nezokuphatha.
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/16